Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka qeyb-galay shir amniga dalka looga hadlaayay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka qeyb-galay shir amniga dalka looga hadlaayay (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta ka qeyb galay shir dhowr saacadood socday oo lagu falan-qeynayay sidii loo xasilin lahaa ammaanka guud ee dalka, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi ka qeyb galay madaxda laamaha amniga dalka.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo shirkaasi shir guddoominayay ayaa hadal kooban uu ka jeediyay shirkaasi ugu baaqay madaxda laamaha amniga ee shirka kasoo qeyb-gashay inay dardar-geliyaan howlaha sugidda amniga iyo xasilinta dalka, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho.
Wuxuu ra’iisul wasaare Kheyre sheegay in amniga uu yahay muhiimadda koowaad ee dowladda ay ku dhisan tahay, xukuumadiisuna ay ka shaqeeynayso sidii lagu heli lahaa amni lagu kalsoon yahay, loona baahan yahay in guulaha laga gaarey la xajiyo, lana wajaho qaabkii dalka oo dhan amni buuxa looga dhalin lahaa.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa kormeer ku tagay wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka, wuxuuna shaqaalaha wasaaradaasi kala qeyb qaatay barnaamij loogu baroor diiqayay wasiirkii hore ee wasaaradaasi Marxuum Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Wuxuu ra’iisul wasaare Kheyre ku tilmaamay wasiir Cabaas Siraaji inuu ahaa shaqsi wadani ah oo jecel dalkiisa islamrkaana tusaale u noqon kara jiilka hadda soo koraaya.
Allaha u naxariistee marxuum Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji ayaa dhawaan lagu dilay agagaarka xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, iyadoona dilkiisa ay ka dambeeyeen illaalada hanti dhowraha guud ee qaranka Nuur Faarax Jimcaale oo gaari uu wasiirka watay ka shakiyay.
Dhinaca kale, madaxda laamaha amniga dalka oo iyagane goobtaasi hadalo kooban ka jeediyay ayaa ballan ku qaaday inay wax weyn ka qaban doonaan amniga dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxayna shacabka Soomaaliyeed ka dalbadeen inay taageeraan barnaamijyada dalka lagu xasilinaayo.